चीनको ‘वान वेल्ट वान रोड’ अवधारणामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको खबर सुनेर खुसी लाग्यो । भारतले सम्झौता नगर्न दबाब दिईरहेको बेला नेपालले सम्झौता गरेको खबर सुन्दा खुशी लाग्यो, अब कार्यान्वयन पनि छिट्टै होस् ।
म प्रदेश नम्बर चारको मतदाता । अहिले प्रदेश नम्बर ७ मा छु । मेरो क्षेत्रमा आइतबार चुनाव हुँदैछ अनि अहिले म भएको धनगढीमा जेठ ३१ गते मात्रै । म र म जस्तै अरु नै प्रदेशमा कार्यरत मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले केही गरेको छ कि ?
हेर अरुको देशमा अर्काको देशबाट कामदार झिकाएर भए पनि देश विकास गर्छन् तर हाम्रो देशका नेताहरु आफुसँग भएका कामदारलाई अर्काको देशमा पसिना बगाउँन पठाउँछन् ।
कार्यपालिका एउटा निर्णय गर्छ, न्यायपालिका त्यसलाई उल्ट्याउँछ । सरकारले नियम मिच्चदैछ कि अदालतले शक्ति प्रयोग गर्दैछ बुझ्नै सकिएन ।
अब चाँही साँच्चै चुनावको चटारोले छोप्यो । गाउँशहर जताजतै चुनावकै चर्चा छ । सबै उम्मेद्धारहरुलाई जितको शुभकामना । तर यो चुनावमा पार्टी होइन, जो सक्षम छ, केही गर्ने अठोट बोकेका अनि राम्रो छवी भएका व्यक्ति चुुनौ । हाम्रो एक भोटले गाउँशहर बन्ने र बिग्रने भएकाले सबै कुरा बुझेर मात्र भोट हालौं ।
चुनाव स्थानिय तहको हुँदैछ, तर पार्टीका घोषणापत्रमा रेलदेखि रकेटसम्मका कुरा लेखिएका छन्, गाउँमा स्कुल र शौचालय बनाउने कुरा भुलेर दलहरुले बाँडेका रेल र पानी जहाजका सपना हामीले कसरी पत्याउने ?
भारतले पाकिस्तान र बंगलादेशको सिमामा पर्खाल लगायो भने नेपालले पाउने भुपरिवेष्ठित देशको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हनन हुन सक्छ । भारतको कदमले नेपालले आयात गर्ने सबै कुरामा भारतकै भर पर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले यो विषयमा अहिल्यैदेखि चनाखो बस्नु जरुरी छ ।
राजनीति गरेँ भन्दैमा स्कुल तथा क्याम्पसमा आगो लगाउन पाइदैन । आफैले ज्ञान लिने ठाउँमा विनास गरेर के गर्न खोजेका हुन् विद्यार्थी संगठनले ।
बिबिसी नेपाली सेवाका प्रमुख रबिन्द्र मिश्र राजनितिमा आउने भन्दा खुसी लागेको छ । हाम्रो आशालाई निरासा नबनाइ दिनु होला । केहि गरेर देखाइदिनु होला ।
हामीले सीमापारीबाट केहि सामान ल्यायौं भने झोला खोतलेर हैरान बनाउँछन तर शिवरात्रीमा आउने साधु बाबाले अवैध मानिएको गाजा लिएर आउँदा पनि कसैले केहि भन्दैनन् ? यो कस्तो कानुन ?
असफल कुलमान घिसिङको लोड्सेडिङ मुक्त बनाउने अभियान सुन्दा खुसी लागो । यदि यसरी नै आफ्नो होइन देशको लागि सबैले सोच्ने हो भने नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्दैन ।
नेताहरुको चाला हेर्दा स्थानिय तहको चुनाव गर्ने कुरा नाटक मात्रै हो कि जस्तो लागेको छ । हामी कहिलेसम्म जनप्रतिनिधी विहिन हुनुपर्ने हो कुन्नी ?
दयाहाङ राई र सौगात मल्ल उत्कृष्ट नायक भएको खबर सुनेर लाग्यो, चिल्लो गाला र ठुलो पाखुरा देखाएर ठुलो स्वरमा चिच्याउँदैमा फिल्म चल्दैन। यदि अभिनय जान्दैन भने कसैको केही लाग्नेवाला छैन ।
सबै मुख्य दलले चुनाव चाहे पनि सरकारले त्यसको मिति तोक्न नसक्नुको कारण मधेसकेन्द्रित दलको विरोध मात्रै त पक्कै होइन जस्तो छ । उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ – कतै यसमा विदेशी हस्तक्षेप त छैन ?
फेरि एसिडकाण्ड दोहोरीयो, मायाप्रेमको कुराले यस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ । प्रेमको नाममा यस्तो घटना कहिलेसम्म ?
कसको उक्साहटमा युट्युब आदि हेरेको भरमा युएइ आउन खोज्छन, यो अरब हो । अमेरिका हैन काम पाउँदैन । काम पाउन यतैको अनुभव खोज्छ । त्यसैले धेरै जना लाखांै डुबाएर आउँछन अनि ठगिएर फर्किन्छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ज्यूका कुरा कसरी पत्याउनु ? मधेसी दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर चुनाव गराउने भन्नुहुन्छ । यस्तै पाराले कसरी संभव होला त ?
देशमा रोजगार नभएर विदेश जानु त हाम्रो बाध्यता हो । तर त्यो प्रक्रिया पनि निकै झन्झटिलो छ, पश्चिम नेपाल र मध्य नेपालका युवालाई लक्षित गरेर कोरियन भाषाको परिक्षा केन्द्र बुटवलमा राखिदिए केही सहज हुनेथियो ।
ओम बहादुर पर्तेल
विद्युत चोरीको आरोपमा पक्राउ परेकाको सम्पत्ती अकुत देखिएको कुरामा हुने छानविन ३३ किलो सुनको छानविन झै नहोस, विजुली चोरी प्रकरण । देशलाई अन्धकारमा धकेलेर लुट्न पल्केकाहरुलाई तत्कालै कारबाही होस्, र सम्पत्ती छानविन गरियोस ।
इश्वर शाही ठकुरी
सबै दलका नेताले पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकिकरण गरे भन्दै प्रशंसा गर्ने तर राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन चाँहि किन आनाकानी गरेका हुन् कुन्नि ?
बेरोजगार नागरिकले जम्मा गरेको करबाट तलव भत्ता खाने तर नागरिककै विषयमा छलफल गर्ने थलोमा हाजिर गरेर टाप कस्ने, यस्ता सांसदबाट हामीले के आशा राख्ने ?
सबै भुकम्प प्रभावितले कहिले राहत पाउलान् सरकार ? जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर मर्ने अनि वर्षामा रातदिन रुझेर बिताउनुपर्ने बाध्यता कहिले सम्म भोग्नुपर्ने हो ?
एउटा लोकमान जाँदैमा खुशीले उफ्रिनु पर्दैन यस्ता थुप्रै लोकमानहरु छन जो भित्रभित्रै मुसाको चालमा देशलाई प्वाल पार्दैछन । अब लोकमानलाई सिफारिस गर्ने र नियुक्ति गर्नेलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ किनभने सबैभन्दा पहिले त तिनिहरुले नै कानुनको उलंघन गरेका छन् ।
मोबाइलमा भएको लोडसेडिङ एप हटाइयो । लोडसेडिङ हटाउन प्रत्यक्ष र अप्रत्य रुपमा भूमिका खेल्ने सबैलाई धेरै धन्यवाद !
अहिले संसदमा चलिरहेको जुहारी अन्त्य गर्न सभामुखले नै उचित भुमिका निभाउनु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । प्रकृयामा गएर हुन्छ या सहमति गराएर हुन्छ ।
नेपालीका लागि न खाडी सुरक्षित छ न त भारत । भारतमा ४ जना नेपालीको माटोको ढिस्कोले पुरिएर ज्यान गयो । कामको खोजीमा विदेशमा नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्ने कहिलेसम्म ?
नेताज्युहरु, हामी नेपाली जनतालाई त्यस्तो देखाउन नै मन छ भने राम्रो कामले जनताको मन जितेर देखाउनुहोस्, सडक जाम गरेर दुख दिएर होइन ।
मलेशिया सरकारले कामदारले तिर्दै आएको लेभि कम्पनीले तिर्नु पर्ने निर्णय गरेको खबर सुन्दा खुसी लाग्यो । तर यो व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन होस् ।
सूचना टांसेर संसद बैठक स्थगित गरेर के गर्न खौजेका हुन् । मैले त ठान्या थिए अशिक्षित मानिसको कुरा मिल्दैन । तर यहाँ त शिक्षितकै कुरा मिल्दैन । अनि कसरी बन्छ देश ?
उज्यालोले गर्दा देश विदेशमा हामीले सूचना र मनोरञ्जन अनि ज्ञानगुनका कुरा सुन्न पढ्न पाएका छौं । उज्यालोका सामाग्री थप परिस्कृत होउन भन्ने शुभकामना दिन्छु ।
मेरो घर संखुवासभा नुनढाकी, पहाडको टुप्पोमा छ, न त विजुली छ, नत खानेपानी । सडकको त कुरै नगरौं । तर मेरो घर पनि नगरपालीकामा पर्छ रे । म रोउँ कि हाँसौ ।
चौथो महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले श्रीलंकालाई १–० ले हराएर समूह ए को विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको खबरले खुसी बनायो । बधाई छ हाम्रो चेलीहरुलाई, अबको खेलमा पनि सफलता मिलोस् शुभकामना ।
स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू तपाईंले घोषणा गर्नुभएको स्वास्थ्य सेवा नागरिकले लिन पाएका छैनन् । सेवा दिने भन्ने कुरापनि कुरामा नै सिमित छ । बुझ्न खोज्दा पनि राम्रो जानकारी पाइन्न, मन्त्रालयले यसमा ख्याल राख्ने कि ?
नेपालमा सातौं राष्ट्रिय खेलकुद मेला लागिरहेको छ । नेपाली खेल हेर्नलाई च्यानल खोज्नु पर्ने तर बिदेशी खेल चाँही सबै च्यानलले लाइभ दिने । के नेपाली खेल विदेशी खेल जस्तै लाइभ दिन सकिँदैन ?
नेताहरुको व्यवहारबाट दिक्क लागिसक्यो । यहाँ नेताहरुलाई न देशको चिन्ता न नागरिकको, छ त केवल सत्ता, भत्ता, शक्ति र पैसाको । अनि किन बनोस् त देश ?
जुन देशका गृहमन्त्रीले सम्पतिको स्रोत श्रीमतीको दाइजो देखाउछन, त्यो देशमा दाइजो लिने र दिनेलाई कारवाही गर भनेर कसलाई भन्नु ?
​राष्ट्रिय खेलकुदको दौड प्रतियोगितामा सीमाकुमारी चौधरी दौडिइन् । हेर नेपालको खेल जगत ? के गर्ने आएको रकम खेलमा नभई अन्तै खर्च हुन्छ अनि कसरी पाउँछन खेलाडीले खेल सामग्री ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानमा जनजाति र मधेसीलाई विभेद गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्नु भएछ । प्रधानमन्त्री ज्यू भनि दिनोस न त, कुन कन धारामा क्षेत्री बाहुनले गर्न पाउने र जनजाती र मधेसीले गर्न नपाउने भनेर लेखिएको छ ?
​भिम जुबुले राई